FANJANAHANA ATAON’I LA FRANTSA | 102 KARA
FANJANAHANA ATAON’I LA FRANTSA
Miverina tokoa mantsy ny fanjanahana ataon’i frantsay.
Efa tamin’ny taona 1896 isika no nozanahan’ny frantsay ary na dia voalaza fa naleo-tena aza tany amin’ny taona 1960 dia mbola ao ihany i la Frantsa na miseho mivantana, izany na an-kolaka sy an-kiafinafina.
Tamin’ny 20 octobra 2015 lasa teo dia tsy tahotra ary tsy henatra no nanambarann’ny ambasadaoro frantsay vavy tamin’ny mpanao gazety malagasy fa an’i Frantsa ireo nosy madinika manodidina an’i Madagasikara. Io fanambarana io no toy ny vanja nampipoaka ny hambom-po sy nampiredareda ny afom-pitiava-tanindrtazana teo amin’ny Malagasy maro.
Raha somary iverenana tokoa mantsy ny tantara dia efa tamin’ny taona 1979 no namoaka ny fehin-kevitra ny Firenena Mikambana milaza mazava tsara fa tokony haverin’i Frantsa amin’i Madagasikara ireo nosy madinika NALAINY AN-KERINY SY NANAOVANY AMBOLETRA. Toy ny manapin-tsofina ary toa vao maika MANDRANITR’ADY mihintsy aza i Frantsa avy amin’io fanambarana nataon’ny ambasadaorony io.
Ny MARINA dia ataon’i Frantsa toy ny trondro an-tanan-tsaka ireo nosy kely madinika ireo ka tsy ho avotsony mihintsy. Manamarina izany dia efa orin’asa mpitrandraka harena an-kibon’ny tany nizerianina sy amerikana dia ny MAREX sy SAPETRO no efa misiki-ponitra fatratra ary nomen’i Frantsa alalana ao amin’ny nosy JUAN DE NOVA.Tsy misy Malagasy avelan’i La FRANTSA hipetraka na hanjono fotsiny aza ao.
Ny hitsikitsika tsy MANDIHY FOANA fa ao RAHA…Mazava loatra izany satria raha ny ao amin’ny nosy Juan de Nova fotsiny dia mahatratra any amin’ny 6 ka hatramin’ny 12 lavitrisa BARILS ny tahirin-tsolika ao ary 3 ka hatramin’ny 5 lavitrisa metatra tora-telo kosa ny entona na ny GAZ. Raha ny teti-bidin’izany rehetra izany dia INDRAY MIPI-MASO dia hiroborobo sy handroso ary hamirapiratra i MADAGASIKARA. Saingy indrisy fa GIAZAN’i LA FRANTSA izany : ka izany no ilazana hoe : MIVERINA INDRAY NY FANJANAHANA ataon’i Frantsa.
Reconnaissance des lieux par un soldat de l’armée française.
Tsy mipetra-potsiny ny Malagasy rehetra isan-tsokajiny ka manao FIHETSIKETSEHANA mba hiverenan’ireo nosy ireo amin’i Madagasikara, araka ny fehin-kevitra noraisin’ny Firenena mikamabana. Na ny andian’ny solombavambahoaka ihany koa, ny hery velona samihafa eto amin’ny Firenena. Raha vao mitady hihetsika anefa izy ireny dia sakanan’ny mpitandro filaminana f’andrao manohintohina ny filaminam-bahaoaka HONO…
Ny Filoham-perin’asa ankehitriny indray dia efa tafaresaka tamin’ny Filoha frantsay ka nilaza fa FIARAHA-MITANTANA no voaresak’izy roalahy. Koa na dia ny tsy mahay na inona na inona aza ve tsy hilaza hoe : FANANAKO MADIO MANGARANGARANA izao ve dia iarahako mitantana amin’izay tsy tompony…Ny tena MARINA dia AMBOLETRA dy DI-DOHA ary BEMARENINA indray no hamerenan’ny frantsay ny fanjanahana an’i MADAGASIKARA sy ny MALAGASY.
20 janvier 2016 - 23 h 10 min Culture 1100 vues